Ngalaba na Ngwa Ngwa
Akụkọ akụrụngwa Ebumnuche iji nye ebe a na-ezukọ maka ndị niile hụrụ ngwaọrụ, kọmputa na teknụzụ n'ozuzu ya. N'ihi anyị ọkachamara otu egwuregwu anyị na-enwe ike ịnye ezigbo ọdịnaya dị elu yana yana ihe kachasị mkpa achọrọ, nke bụ ọtụtụ ndị obodo anyị na-agụ akwụkwọ nwere ekele ọ bụkwa ihe dị mkpa na-egosi ọdịiche anyị na asọmpi anyị.
Anyị na-emepe emepe ọdịnaya maka weebụsaịtị a kemgbe 2005, yabụ anyị ejirila ọtụtụ isiokwu dị iche iche tụlee. Iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịchọta ozi ị na-achọ, n’okpuru, anyị na-eweta ndepụta nke isiokwu websaịtị anyị ji ahazi.
Ndepụta nke ngalaba
Ngwaọrụ mepere emepe
Ihe nkiri na usoro
Foto na ụda
Ndị na-egwu egwuregwu
Eziokwu doro anya
Ndị na-arụ ọrụ